Thu, May 28, 2020 at 3:42am
काठमाडौँ, ५ असार । अफगानिस्तानका रसिद खानलाई १२औँ विश्वकपमा उदीयमान र स्टार लेगस्पिनरका रूपमा हेरिएको थियो । पछिल्लो चार वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अफगानिस्तानको सफलतामा नायक बनेका रसिदद्वारा इंग्लिस भूमिमा प्रेरणादायी प्रदर्शन हुने अपेक्षा थियो । तर, इंग्ल्यान्डविरुद्ध ओल्ड ट्राफोर्डको मैदानमा रसिदले करिअरकै खराब दिनको सामना गर्न पुगे । एकदिवसीय तथा टी–२० खेलमा कसिलो बलिङ गर्नुका साथै विकेट लिने छवि बनाएका रसिदले इंग्ल्यान्डविरुद्धको..
काठमाडौं, ४ असार भारतीय ओपनिङ ब्याट्सम्यान शिखर धवन इंग्ल्यान्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटबाट बाहिरिएका छन् । अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलका क्रममा औंला भाँचिएपछि दुई खेलबाट बाहिरिएका धवनलाई निको हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने भएपछि विश्वकपबाट हटाइएको हो । उनी भारतका भरपर्दा ब्याट्सम्यान हुन् । उनले अष्ट्रेलियाविरुद्ध ११७ रन बनाएका थिए । उनको रोहित शर्मासँग राम्रो ओपनिङ साझेदारी रहँदै आएको थियो । धवन सुरुआतमा कम्तीमा दुई..
काठमाडौँ, ४ असार । मित्र राष्ट्र थाईल्याण्डको पतया सहरमा भएको छैटौं एशियन यु – २० जुनियर कुराश च्याम्पियनसिपमा नेपालले कास्य पदक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । महिला ५७ केजी तौल समूहमा कृती शर्माले नेपालका लागि कास्य दिलाएकी हुन् । ८ राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा रहेको ५७ केजी तौलको सेमिफाईनलमा शर्मा कुराश खेलका लागि निकैनै राम्रो मानिने उज्वेकिस्तानकी खेलाडी मामासाहेवा ईरोदा संग पराजित भएकी..
कञ्चनपुर, ४ जेठ कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आजदेखि शुरु भएको प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो खेल प्रदेश नं २ ले कर्णाली प्रदेशलाई नौ विकेटले हराउँदै जित हात पारेको छ । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको कर्णालीले १९।२ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ५८ रन बनाएको थियो । कर्णालीका लागि रविना चौधरीले सर्वाधिक १३ र लक्ष्मी रिमालले आठ रनको योगदान गरेका थिए । प्रदेश नं २ का..
काठमाडौँ, ४ असार । कोपा अमेरिकामा आयोजक ब्राजिलले भेनेजुएलासँग बुधबार बिहान गोलरहित बराबरी खेलेको छ । समूह ए को यो खेलपछि ब्राजिल चार अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । ब्राजिलले खेलका अवधिमा केही राम्रा मौका सिर्जना गरेपनि त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न सकेन्। खेलमा ब्राजिलले दुई गोल गरे पनि भिडियो एसिस्टेन्स रेफ्री (भीएआर) का कारण दुबै गोललाई मान्यता दिइएन । पहिलो हाफमा रोबेर्टो फेरमिन्होले ब्राजिलका लागि..
काठमाडौं, असार ३ इंग्ल्यान्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आयोजक इंग्ल्यान्डले सबैभन्दा कमजोर मानिएको टिम अफगानिस्तानलाई जितका लागि ३९८ रनको विशाल चुनौती दिएको छ । मंगलबार टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्यान्डले निर्धारित् ५० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा ३९७ रन बनायो । कप्तान ओइन मोर्गानले कीर्तिमानसहित ७१ बलमा १४८ रन बनाएपछि इंग्ल्यान्डले विशाल योगफल खडा गरेको हो । उनले केबल ५७ बलमा शतक बनाएर..
काठमाडौं, ३ असार । अर्को वर्ष २०२० को अक्टोबर १८ देखि नोभेम्बर १५ सम्म अस्ट्रेलियामा टि–२० विश्वकप हुँदैछ । नेपालले अर्को महिना खेल्ने खेल यही विश्वकपसम्म पुग्ने यात्राको अर्को खुड्किलो हो । टी-२० विश्वकप छनोटको एसिया फाइनल खेल्ने नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ । उमेश पटवाल राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि कप्तान पारस खड्काको कप्तानीमा २५ सदस्यीय टोली घोषणा भएको हो ।..
काठमाडौं, ३ असार । विश्वकप क्रिकेटमा सोमबार इंग्ल्यान्ड र अफगानिस्तानबिच प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । म्यान्चेस्टरमा सोमबार नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा इंग्ल्यान्डले अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । इंग्ल्यान्ड चौथो जितको खोजिमा हुनेछ भने अफगानिस्तान पहिलो जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ । अफगानिस्तानले अहिलेसम्म चार खेल खेलिसक्दा पनि जित हात पार्न सकेको छैन । अंकविहीन बनेको अफगानिस्तानलाई ठूलै चूनौती परेको छ । पहिलो खेलमा अष्ट्रेलियासँग..
काठमाडौं, २ असार माउरिजिओ सारीले इटालियन सिरी फुटबल च्याम्पियन युभेन्नटसको प्रशिक्षक बन्नका लागि चेल्सी छोडेका छन् । इंग्लिस क्लब चेल्सी छोडेर उनले इटालियन क्लबसँग तीन वर्षको सम्झौता गरेका हुन्। सारी २०१८ को जुलाईमा नापोलीबाट चेल्सी गएका थिए । जहाँ प्रिमियर लिगमा तेस्रो स्थानमा रहेको चेल्सीलाई युरोपा लिग जिताएर सफल नै दरिए । सिजन सकिनेवित्तिकै मासिमिलियानो एलेग्रीले युभेन्टस छाडेपछि चेल्सीलाई एक सिजनमै छाडेर..
काठमाडौँ, २ असार । ईनोभेटिभ स्कुलले 'ओलम्पिक डे'का अवसरमा ज्ञानोदय स्कुलको आयोजनामा भएको अन्तरस्कुल बास्केटबलमा जितलाई जारी राखेको छ । ज्ञानोदयस्कुलमा सोमबार भएको प्रतिस्पर्धामा आयोजक ज्ञानोदयलाई दर्पणको ८ अंक मद्धतले १४ – ८ अंकले पराजित गर्दै जित निकाल्ने क्रमलाई जारी राखेको छ । आईतबार भएको खेलमा ईनोभेटिमले एलएलाई पराजित गरेको थियो । यस्तै आयोजक ज्ञानोदयले सोमबार भएको खेलमा एक जित र एक हार..
काठमाडौँ, २ असार एएफसी कप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत पाँचौं खेल खेल्न नेपाली लिग च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब आज बङ्गलादेशको ढाका प्रस्थान गरेको छ । यही असार ४ गते बङ्गलादेशको ढाकास्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपाली लिग च्याम्पियन मनाङले बङ्गालदेशको लिग च्याम्पियन अबहानी लिमिटेडसँग जित निकाल्ने उद्देश्यका साथ प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । यसअघि गत अप्रिलमा नेपालमा नै भएको खेलमा मनाङ अबहानीसँग १–० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो..
ब्राजिल, २ असार । ब्राजिलमा जारी दक्षिण अमेरिकाको प्रतिष्ठित कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा उरुग्वे विजयी भएको छ । उरुग्वेले १० खेलाडीमा सीमित भएको इक्वेडरलाई ४–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । समूह ग को यस प्रतिस्पर्धामा उरुग्वेका तर्फबाट लुइस सुवारेज, एडिन्सन काभानी र निकोलास लोडेरोले एकएक गोल गरेका थिए । इक्वेडरका आर्टुरो मिनाले खेलको ७८औं मिनेटमा आत्मघाती गोल..
काठमाडौं, २ असार । आईसीसी एकदिवशीय विश्वकप क्रिकेटको बहुप्रतिक्षित खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई ८९ रनले पराजित गरेको छ । पाकिस्तानसामु जितका लागि भारतले ३३७ रनको लक्ष्य दिएको थियो । तर वर्षाको कारण खेल रोकिएपछि डकवर्थ लूइस नियमका आधारमा ४० ओभरमा ३०२ रनको लक्ष्य मिलेको थियो । तर, पाकिस्तान २१२ रनमा सीमित भयो । वर्षा हुँदा ७१ रन बनाएर क्रिजमा रहेका कप्तान विराट कोहली खेल..
काठमाडौं, १ असार कोपा अमेरिकाअन्तर्गत सोमबार समूह 'बी' को आफ्नो पहिलो खेलमा एसिया कप विजेता कतारले पाराग्वेको सामना गर्दैछ। विश्वकै ठूलो रंगशाला मराकानामा राति पौन १ बजे हुने खेलमा दुवै टिम जित निकाल्दै समूह चरण प्रवेशको दाउँमा रहेका छन्। एसियाकपको उपाधी जितेको कतारले उपविजेता जापानसँगै आमन्त्रित टोलीको रुपमा कोपा अमेरिकामा सहभागीताको अवसर पाएको हो। हालसम्म कतारले पाराग्वेसँग ३ मैत्रीपूर्ण खेलमा १ जित १..
लन्डन, १ असार । इङ्ल्यान्डमा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार भारत र पाकिस्तानबीचको खेल शुरु भएको छ । इङ्ल्यान्डको म्यान्चेस्टरमा भएको यस प्रतिस्पर्धामा पाकिस्तानले टस जिती पहिले क्षेत्ररक्षण रोजेको छ । भारतले ३ ओभरसम्मको खेलमा बिनाकुनै क्षति ११ रन बनाएको छ । भारतका रोहित शर्मा र केएल राहुलले व्याटिङ प्रारम्भ गरेका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले यदि टस जितेको खण्डमा..
काठमाडौँ, १ असार । म्यानचेस्टरको विशाल सडक र ओल्ड ट्राफोटको स्ट्याण्ड, आईसीसी एकदिवशीय विश्वकप क्रिकेटको बहुप्रतिक्षित खेलमा समर्थकको उत्साहसँगै सानदार हुनेछ । यो खेल विश्व क्रिकेटकै रंगशालामा हाउसफुल र विश्वभर टेलिभिजनमार्फत करोडाैँले प्रतिक्षा गरिरहेको खेल हो । विश्वकपको हेड टू हेडमा भारत पूर्ण हावी छ । सन् १९९२ यता यी दुईबीच विश्वकपमा ६ पटक भिडन्त भएकोमा पाकिस्तानले अहिलेसम्म जित्न सकेको छैन । एकदिवशीय..
काठमाडौँ, ३२ जेठ ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिकाको ४६ औं संस्करणमा शनिबार राति पाैने १ बजे समूह ए अन्तर्गत भेनेजुएला र पेरुबीच तथा आइतबार बिहान पाैने ४ बजे समूह बी अन्तर्गत पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना र कोलम्बियाबीच खेल हुँदैछ । साढे दुई दशक यता कुनै पनि ठूलो फुटबलको उपाधि जित्न नसकेको अर्जेन्टिनामा यस पटक कप्तान लियोनल मेस्सीसँगै पाउलो डिबाला, सर्जियो अगुएरो, एन्जल डि मारियाजस्ता..
एजेन्सी, ३२ जेठ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार दुई खेल हुँदैछन् । पहिलो खेल अष्ट्रेलिया र श्रीलंकाबीच नेपाली समय अनुसार सवा ३ बजे लण्डनमा हुनेछ भने दोस्रो खेल अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिकाबीच साँझ सवा ६ बजे कार्डिफमा हुनेछ । तीन खेल खेलेको अफगानिस्तान अहिलेसम्म जित हात पार्न नसक्दा अंकतालिकाको पुछारमा छ । दक्षिण अफ्रिकाको चार खेलबाट एक अंक मात्रै छ ।..
काठमाडौँ, ३१ जेठ घरेलु टोली इंग्ल्याण्डले आइसीसी विश्वकप क्रिकेट २०१९ मा तेस्रो जित हात पारेको छ । शुक्रवार भएको खेलमा इंग्ल्याण्डले वेष्ट इन्डिजलाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो । तेस्रो जितपछि ४ खेलबाट ६ अंक जोड्दै इंग्ल्याण्ड दोस्रो स्थानमा उक्लेको हो । साविक विजेता अष्ट्रेलिया को पनि समान ६ अंक रहेपनि इंग्ल्याण्ड रनरेटको आधारमा अगाडि रहेको हो । यस्तै दोस्रो हारपछि ४..
एजेन्सी, जेठ ३१ नेपाली समयअनुसार शनिबार बिहान ब्राजिलमा कोपा अमेरिका फुटबल सुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा यसपटक साबिक उपविजेता अर्जेन्टिना र ब्राजिललाई प्रमुख उपाधि दाबेदार टिम मानिएको छ । दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यसपटक को च्याम्पियन बन्ला ? यसमा सबैले आ–आफ्नै दाबी र भविष्यवाणी दिइरहेका छन् । यस्तैक्रममा चर्चित संस्था ‘ओड्स’ले एक अध्यन÷सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ब्राजिललाई यसपटक कोपामा..
काठमाडौँ, ३१ जेठ । जारी विश्वकपको शुक्रबार हुने खेलमा आयोजक इङ्ल्यान्डले बलियो प्रतिद्वन्द्वी वेस्ट इन्डिजको सामना गर्दैछ। उक्त खेल साउथह्याम्पटनस्थित रोज बल रंगशालामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३:१५ बजे सुरु हुनेछ। वेस्ट इन्डिजले सन् १९७५ र सन् १९७९ मा विश्वकपको उपाधि जितिसकेको छ। इङ्ल्यान्डले भने हालसम्म विश्वकप जित्न सकेको छैन। जारी विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजको तुलनामा इङ्ल्यान्डको ब्याटिङ र बलिङ दुबै उत्कृष्ट देखिएको छ।..
Results 1915: You are at page 22 of 64